Maxkamad Xukun ka soo saartay Haweenay Saygeedi u Qarisay AIDS - iftineducation.com
“Haweenaydan oo 30 jir ah waxa la caddeeyey inay xannuunkan ku dhacay 2006-dii, Ninka guursadayna waxaa uu sheegay hadduu ogaan lahaa inaanu waligii guursadeen”
Lamaane u dhashay dalka Australia, ayaa waxaa ka dhex dhacday qiso layaab leh, kadib markii ay is guursadeen, iyada oo haweenaydu u qarisay saygeeda in ay la nooshahay xannuunka HIV/AIDS-ka, iyadoo uu ninka guursaday haweenaydan maxkamadda u tegay si uu heshiiska guurka dhexmaray ugu tilmaamo mid aan sax ahayn, ugana noqdo, balse maxkamadda waxay xukuntay in uu sax yahay.
Kiiskan, ayaa noqday kii ugu horreeyey ee noociisa ah ee la hor keeno maxkamadaha dalka Australia. Haweenayda oo da’deedu 30 jir tahay waxa la caddeeyey in ay xannuunkan ku dhacay sannadkii 2006-kii.
Ninka haweenaydan guursaday oo 50 jir ah, waxa uu isagu sheegay hadduu ogaan lahaa in ay xannuunkan la nooshahay in aanu waligii guursadeen.
Haweenaydan ayaa iyadu dalbaday furiin sannadkii ina dhaafay, laakiin ninkeeda ayaa diiday maxkamaddana ka codsay in ay laasho codsigeeda, isaga oo damaanad uga dhigay in khiyaamo ku jirto. Waana loo ogolaaday in waxba kama jiraan laga dhigo, isagoo aaminsanaa in haweenaydu u jeeday hantidiisa.
Maxkamadda qoyska Australia ayaa diiday codsiga ninka, waxana sidoo kale la sheegay in uu ninku ku khaldamay fikraddiisa oo aanay jireen wax hanta ah oo la bixinayaa hadduu guurku ahaa khalad.
Ninkan ayaa ku dacwooday in uu kiiskoodani yahay kii ugu horreeyey ee maxkamadda la horkeeno, waxaannu ka dalbaday in ay si gaar ah u tixgeliso codsigiisa ah in waxba kama jiraan laga dhigo dacwadda haweenayda isaga oo ku saleeyey in labadooda dhinacba ku guuldarraysteen inay ogadaan xannuunkan dhimashada sababi kara.
Mr. Slater iyo Mr. Gordon oo labadooduba ah khabiir ku takhusay sharciga qoyska waxa uu u sheegay wargeyska Herland Sun in niyadda kiiskani tahay wax fudud, iyaga oo ku sababeeyey in ay waajib ahayd in midkoodba ka kale uu dib u eego inta aannu guursan taariikhdooda shakhsi ahaaneed.